५ चैत, काठमाडौं । गर्मी महिना सुरु हुँदैछ र यो मौसम लामखुट्टेका कारण धेरैजसोको अप्रिय बन्ने गर्छ । के तापईंले याद गर्नुभएको छ ? लामखुट्टेले केही विशेष मानिसलाई बढी टोक्ने गर्छ । तपाईं कोही साथीसँग कतै पार्कमा घुम्न जानुभएका बेला लामखुट्टेले कसैलाई बढी नै टोक्ने र कसैलाई अलि कम टोक्ने गर्छ । लामखुट्टेले केही मानिसहरुलाई किन विशेष निशानामा पार्छ ? यसबारे हामी जानकारी दिँदैछौं ।